Rodobe 1 oktobra :"Tsy maintsy hody aho" hoy ny Filoha Ravalomanana
Mikasika ireo fivoriana etsy sy eroa dia tsy tokony manatrika izany ianareo ao anatin'ny ankolafy raha vao fivoriana tsy miaraka amin'ny Troika. Momba ny fankatoavana iraisampirenena dia tsy hisy izany raha tsy tafody an-tanindrazana aho satria ao anatin'ny sonia izany.Ny hafatro dia aza matahotra fa tsy maintsy hody aho satria hapetraka tsy ho ela ny birao maharitrin'ny Sadc handamina izany.
Henoy eto ny antso : Andriamatoa Raveloson Constant dia nanambara fa tetezamita tsy fantampiaviana izao misy izao. Tsy mbola misokatra ho antsika ny RNM sy TVM, tsy mbola voakarakara ny gadra politika.Rehefa miteny ilaikely fa tsy misy izany fihaonana antampony izany dia ilazao izy fa ny sonia nataonareo efa-mianaka dia tsy mbola vita . Tsy an-dRajoelina ny tetezamita ka izy no hanendry ny tompon'andraikitra rehetra. Ny Praimnisitra dia tsy anjaran-dRajoelina sy Ratsirahonana no manendry azy, fa rehefa tsy hiresaka amin'ireo filoha telolahy voafidimbahoaka Rajoelina dia aleo izy manangana firenena any ivelan'i Madagasikara.